Tsy nanavahana, tsy nijerena tavan’olona: olona 398 tratra tsy nanao arovava nosazin’ny polisy | NewsMada
Par Webmaster Two sur 28/10/2020
Olona hamonjy asa, mpiantsena, reseverana taxi-be, mpitondra moto…Tsy nanavahana na iza na iza, tsy ankifidy tavan’olona fa niharan’ny sazy, nampanaovina asa fanadiovana avy hatrany ireo olona miisa 389 tratran’ny polisy tsy nanao arovava, teto an-drenivohitra, omaly maraina.
Taorian’ny fanambaran’ny prefen’Antananarivo, niroso tamin’ny fampanaovana ny asa soa iombonana ho an’ireo tsy nanao arovava ny polisim-pirenena. Vokany, omaly fotsiny, efa nahatratra 398 ireo tratra. Isan’izany ireo olona nandeha niasa, ny mpiantsena, mpivarotra, reseverana fiara taxi-be. Ao koa ireo mpitondra sy mpitaingina moto sady tsy manao aroloha no tsy manao arovava. « Ireo no anisan’ny tratran’ny polisy tsy nanao arovava ka nasaina nanao asa soa iombonana », hoy ny fanazavan’ny polisim-pirenena, loharanom-baovao. Miandahy miambavy ireo tratra nanao ny asa soa ary mbola hitohy ny fanaraha-maso ataon’ny mpitandro filaminana. Ho hentitra ihany koa ny sazy, satria raha teo amin’ny 15 ka hatramin’ny 30 minitra teo ny fanadiovana atao, hiitatra ho ora iray izany, ankehitriny. « Aza miandry ny aretina hiverina hirongatra indray isika rehetra vao ho tonga saina amin’ny fanajana ny fepetra hisorohana ny valanaretina Covid-19 », hoy hatrany ny polisy. Nohamafisiny fa tsy fanasaziana akory izao fa fampahatsiahivana amin’ny tokony hiarovan-tena mba tsy hiverenan’ny fihibohana indray.
Hentitra amin’ny fampanajana ny fepetra koa ny zandary…
Mitohy hatrany ny tokony hanajana ireo fepetra hisorohana amin’ny mety hiverenan’ny fiparitahan’ny covid-19, araka ny toromarika nomen’ny Filoha Rajoelina na dia tapitra aza ny fepetra momba ny hamehana ara-pahasalamana. Hita fa mbola misy ireo olona mitondra ny otrikaretina coronavirus amin’ny faritra maro manerana ny Nosy ary misy hatrany ireo mamoy ny any. Manoloana izany, ny zandarimariam-pirenena dia mbola manohy sy vao mainka aza hanamafy ny fampanajana ireo fepetra hisorohana ny fiparitahan’ny covid-19 ary nilaza izy fa ho hentitra manomboka izao. Hajaina hatrany ny fepetra efa nahazatra hatramin’izay toy ny fanaovana arovava, ny elanelana isam-batan’olona na eny an-dalana izany na ao an-trano na any anaty fiara, ny fampiasana tsiranoka fanasana tanana. “Hihamafy ny fanasaziana ireo minia manao gaboraraka sy tsy manaja izany fepetra izany. Alao hery, arovy ny tenanao mba hiarovanao ny hafa sy tsy hiverenan’ny fihibohana indray”, hoy ny zandary.
Henintsoa Hani sy J.C